Akụkọ - Akụkọ Companylọ ọrụ - NCG vs The Exchange vs Shengda agenda symposium
Na 16: 00, 20/11/2020, Wu Quandong, Onye isi ala nke Nongchuanggang Cross Border E-Commerce (Weifang) Co. Ltd, VP Ma Yuyou, na-eduga ndị otu ahụ ka ha gaa ma gaa nzukọ mkparịta ụka na East Asia Livestock Exchange Ltd Isi isiokwu nke nzukọ a bụ ịtụle tụlere China Nongchuanggang cross-border e-commerce industrial park (nke a na-akpọ NCG), Anqiu Shengda Agricultural Products Trade Ltd (nke a na-akpọ Shengda) na East Asia Livestock Exchange (nke a na-akpọzi ya ka dị ka Exchange). Na-atụle uru dị iche iche n'otu n'otu, na-achọ imekọ ihe ọnụ, ntinye uru nke akụrụngwa, na-akwalite mbupụ ọrụ ugbo Anqiu na mmepe nke ọrụ ego, wulite ogo ogo ugbo Anqiu.
Wu Quandong rụtụrụ aka na ogige ogige ụlọ ọrụ e-commerce ga-arụ ọrụ nke ọma na Anqiu, jikọọ ụlọ ọrụ na-ebupụ ya, wee bụrụ usoro azụmahịa e-commerce nke ga-esite na ụlọ ọrụ ọrụ, iji wee jiri nwayọọ nwayọọ wuo Anqiu banye na mpaghara oru ugbo ala. E-commerce ụlọ ọrụ ogige ụlọ ọrụ E-commerce kwesịrị ịmalite ụdị ọrụ na-ejikọ n'ịntanetị na n'ịntanetị, kwalite azụmahịa e-commerce na azụmaahịa mba ụwa, jikọta B2B na B2C, ma jikọta ndị ahịa pere mpe na ndị ahịa na nnukwu ụlọ nkwakọba ihe esenidụt. Were ahia ahia dika uzo ntinye ohuru ma nye ohere zuru oke nke Xinjiang. Nọgide na -ejikọ arụkọ uru nke akụkụ anọ nke mgbanwe, ya bụ ntụpọ buru na ndepụta, bidding na ire, ịzụrụ na n'ire, ego ọkọnọ. Dabere na ntụpọ, ghọta na-elekwasị anya nke online ego na offline ọkọnọ yinye.
Ndị sonyere mụtara banyere ngalaba azụmaahịa na usoro ọrụ nke mgbanwe ahụ site na ngosi vidiyo tupu usoro a. Na nzukọ ahụ, ha tụlere ụzọ imekọ ihe ọnụ yana atụmanya sara anya nke NCG, Exchange na Shengda. Gao Fulong, Zhang Min na Liu Shili nyochara ma tụlee azụmahịa na uru nke ụlọ ọrụ ha dị iche iche wee ruo ebumnuche nkwado mbido: mgbanwe ahụ ga-eme ka ọrụ ugbo na akụrụngwa na ngwaahịa ga-abawanye ma zute ọnọdụ nke azụmaahịa n'ịntanetị. Royal na-adabere na mgbanwe ahụ iji nọgide na-agbasawanye ogo ahụ, na-akwalite ngwaahịa ugbo Anqiu na ahịrị. Ogige ụlọ ọrụ e-commerce na-arụkọ ọrụ na Shengda Logistics, na-ejikọ na azụmahịa na ntanetị na nke na-anọghị n'ịntanetị nke mgbanwe ahụ, na-ejikọkwa ọrụ ego na-eweta na ikpo okwu. Companieslọ ọrụ atọ ahụ enweela usoro nkwado nke ụdị ngwaahịa.